Hadii Barcelona Dooneysa Greizmann Waa In Ay Iibisaa Sadex Kamid Ciyaartooydeeda | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Hadii Barcelona Dooneysa Greizmann Waa In Ay Iibisaa Sadex Kamid Ciyaartooydeeda
(10-3-2018) Marka laga soo tago in meel wanaagsan ay ka joogto tartan walba ay ku lug leedahay kooxda Barcelona ayaa wali ka bixin suuqa kala iibsiga waxaana ay xagaaga doonayaan in ay sameeyaan saxiixyo hor leh.
Suuqii jiilaalka ee la soo dhaafay Barcelona ayaa hor maro ka sameysay suuqa kala iibsiga, waxaana ay Camp Nou ka soo dajiyeen Philippe Coutinho iyo Yerry Mina, qorshahooda ayaan wali ku jira in ay saxiixyo keenaan kooxda.
Wadahadaladii Barcelona ee ku aadanaa Arthur ayaa soo idlaaday, waxaana kaliya la sugayaa in xidiga Brazil uu yimaado xagaaga kooxda maamusha Camp Nou.
Barcelona ayaa xagaagii la soo dhaafay ku fikirtay in saxiixa laacibka France, laakiin rajadii Barcelona ee Greizmann ayaa ceel ku dhacday maadaama kooxdiisa Ateltico Madrid ay dalbatay aduun dhan 200 Milion oo Euros.
Qodobka kale ee Barcelona ay ku heli karto Greizmann ayaa ah qaab amaah ah, maadaama kooxda ay gali doonto dhismaha garoonkooda Camp Nou isla markaana aysan heshiisyo lacago qaali ah ku kacaya sameyn karin.
Barcelona ayaa tan iyo xagaagii la soo dhaafay suuqa ku bixisay aduun dhan 436 Milion oo Euros.
Qeybta kamid ah lacagahaasi ayaa markale ay suuqa galisay Barcelona, waxaana ay ku bixiyeen heshiisyadii ay Camp Nou ku keeneen xidigaha Coutinho iyo Ousmane Dembele.
Imaanshaha Greizmann ee Barcelona ayaa ku suurta gali doonta hal oo kaliya taa oo ah in kooxda ay iska iibiso xidigaha Denis Suarez, Arda Turan, Andre Gomes iyo Aleix Vidal oo aan muhiim ka ahayn safka koowaad ee Bluagrana.